Fampahalalana momba ny fanomezana - Banky Sakafo any Galveston County
Afaka manao fanomezana ho fanomezam-boninahitra olona na fahatsiarovana olona iray ianao.
Jereo ohatra eto ambany
Ho an'ny Memory / Honor of certificate dia ampidiro ny fampahalalana ho an'ny mpandray anjara amin'ny sehatra fanehoan-kevitra rehefa manao fanomezana an-tserasera. Ho an'ny taratasy fanamarinana mafy, ampidiro ny anaran'ny mpandray sy ny adiresy mailaka. Ho an'ny fanamarinana dizitaly, ampidiro ny anaran'ny sy ny adiresy mailaka.
Fanontaniana na ahiahy, mailaka Dora@galvestoncountyfoodbank.org
Ny fanomezana sakafo ho an'ny tsirairay dia ekena ao amin'ny trano fanatobiana entana any amin'ny 624 4th Ave N, Texas City, TX. 77590. Alatsinainy - Zoma 8 maraina ka hatramin'ny 3 hariva.
Manaova fampiantranoana sakafo sy vola
Ampidino eto ny fampahalalana packet
Manomeza ho an'i Kidz Pacz
Ampidino i Kidz Pacz entana tadiavina indrindra